अल्गोरिदम नसों इंजेक्शन कार्यान्वयन प्रविधी
आफ्नो जीवनको प्रत्येक व्यक्ति दबाइ लिइरहेको संग सामना गर्नुपरेको थियो। प्रायजसो, लागूपदार्थ पाटी, दाना, suppositories र पाउडर मा निर्धारित छन्। यस फारममा रोगी आफ्नै तिनीहरूलाई लिन सुविधाजनक छ। डाक्टर एक नस मा दबाइ को परिचय prescribes जब तर, थप गम्भीर र गम्भीर अवस्था हो। यो के थप छलफल गरिनेछ छ। तपाईं अल्गोरिदम सिक्न छौँ नसों इंजेक्शन। यो प्रक्रिया को कार्यान्वयन को peculiarities मा तल छलफल गरिनेछ। पनि लायक उल्लेख नसों ड्रिप इंजेक्शन राखिएको छ। यस तर्कको hereinafter वर्णन गरिनेछ।
एक नस मा इंजेक्शन को प्रकार
नसों इंजेक्शन अल्गोरिदम यो सबै इंजेक्शन को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, केहि फरक हुन सक्छ। एकदम अक्सर विरामीहरु एक रक्त परीक्षण निर्धारित छन्। बार सामाग्री नस विशेष पम्प संयन्त्र वा पारंपरिक सिरिंज देखि सञ्चालन गरिएको छ।
पनि एकदम लोकप्रिय शट। यस मामला मा, एक निश्चित दबाइ नसों इंजेक्शन समयमा प्रबन्ध छ। यो योजना दबाइ छिटो शरीर मार्फत फैलाउन र आफ्नो कार्य सुरु गर्न अनुमति दिन्छ।
इंजेक्शन एक dropper को फारम लिन सक्छ। यस मामला मा, सेटिङ अल्गोरिदम पनि यसको आफ्नै विशेषताहरु छन्। यस्तो हेरफेर अक्सर प्रदर्शन गरिएको छ भने, रोगी एक नस मा एक विशेष कैथिटर, एक स्थायी प्वाल पार्ने काम छाला परहेज इंजेक्शन छ। यस मामला मा, इंजेक्शन तयारी अर्को तरिका गरिन्छ। अल्गोरिदम विचार नसों द्वारा प्रशासन इंजेक्शन।
विश्लेषण लागि नसों इंजेक्शन लागि अल्गोरिदम के हो? एकदम अक्सर विरामीहरु अध्ययनको लागि रगत दान गर्न छ। यो अनुमति दिन्छ सही निदान र सही र समसामयिक उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन्। एकै समयमा कार्य गर्न आवश्यकता रूपमा?
सबै को पहिले आफ्नो हात धुन आवश्यक छ। तपाईं स्वच्छ प्रक्रियाहरु पूरा गर्न सक्नुहुन्न भने, यो स्टेराइल पन्जा वा चिल्लो Palms र औंलाहरु जीवाणुरोधी जेल प्रयोग गर्न आवश्यक छ। अर्को पिस्टन उपकरण लिन र प्लास्टिक प्याकेजिङ्ग रोज्नुहोस्। यो यस्तो उपकरण रगत नमूना बनाउन सजिलो तरिका हो।
अर्को चरण रोगी को तयारी हुनेछ। विशेष दोहन वा पट्टा लिनुहोस्। हात राख्नु र forearms गर्न ल्याउन, हात, चयन गरिएको साइट तान्नुहोस्। एक जोडेको धेरै पटक तौलिया वा तकिया तयार, मानव कुहिनो अन्तर्गत उपकरण राख्न। रोगी बस्न वा नस देखि रगत संकलन समयमा सुत्न गर्नुपर्छ भनेर नबिर्सनुहोस्। केही कस्सिएकोमुट्ठी बनाउन र नस पंप गर्न व्यक्ति सोध्नुहोस्।
लिन एक कपास swab वा पट्टी रक्सी समाधान मा भिगो र तपाईं सुई सम्मिलित जाँदैछन् जसमा क्षेत्र हटाउन। को tampon को दिशा इंजेक्शन साइट को केन्द्र गर्न बाह्य देखि हुनुपर्छ। दाहिने मा सुई संग plunger लिन र बायाँ शिरापरक चड्डी palpate र सबैभन्दा सुन्निएको चयन।
चिटिक्क, तर दृढ गति नस मा सुई घुसाउनुहोस्। एक पटक तपाईं खाली महसुस, दानाको देखि कवर हटाउन र रगतको सही रकम प्रविष्ट गर्नुहोस्।
, नस देखि सुई हटाउन अघि tourniquet हटाउन। को इंजेक्शन साइट को क्षेत्र मा एक बाँझ पट्टी राख्नु, र हात फ्लेक्स गर्न रोगी सोध्नुहोस्।
औषधि प्रशासन संग अल्गोरिदम नसों इंजेक्शन रगत नमूना सर्किट गर्न केहि पनि त्यस्तै हो। तर, यी manipulations अझै पनि प्रत्येक अन्य फरक। यो रगत प्रवाह मा लागूऔषधको परिचय व्यवसायीक सुम्पिएको पर्छ भनेर टिप्पण लायक छ। मात्र यसरी तपाईं हेरफेर सही बाहिर छ कि एक ग्यारेन्टी छ।
आफ्नो हात कीटाणुरहित वा स्टेराइल पन्जा लगाउने। प्याकेज देखि सिरिंज हटाउन र चिकित्सा संग ampoule अनप्याक। यदि आवश्यक स्वाइप medicaments मिश्रण र इंजेक्शन लागि उपकरण तिनीहरूलाई बोक्न।
रोगी गरेको माथिल्लो हात वा कमर पट्टा मा एक tourniquet लागू हुन्छ। मुट्ठी पंप नस सोध्नुहोस्।
माथिको चयन च्यानल रक्सी संरचना को क्षेत्र सफा। आफ्नो बायाँ हात को औंला, तल कुहिनो को छाला तान्नु। आफ्नो दाहिने हात मा, पिचकारी अप कटौती गरिएको छ राख्न र नस संग छाला पियर्स। को सुई केही मिलिमिटरमा सम्मिलित र सिरिंज को plunger मा फिर्ता पुल। यसको गुहा रगतले भर्न सुरु भने, त्यसपछि यो सुई नस छ भन्ने संकेत गर्छ।
अर्को, नसों इंजेक्शन निरूपण अल्गोरिदम को दोहन हटाउन पनि समावेश छ। पनि आराम र ब्रश मुट्ठी खुकुलो पार्नु गर्न रोगी सोध्नुहोस्। बिस्तारै थिच्न गर्ने अधिकार औंठी पिस्टन मा सुरु गर्नुहोस्। दबाइ प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसलाई हावा बुलबुले छैन भनेर निश्चित गर्नुहोस्।
इंजेक्शन द्वारा नस पूर्ण देखि सिरिंज हटाउन। कपास ऊन संग घाउ निचोड र एक पट्टी लागू हुन्छ।
कसरी dropper राख्न?
यस तर्कको प्रदर्शन नसों इंजेक्शन (ड्रिप) एक इंजेक्शन सिरिंज धेरै समान छ। केवल सुई को सम्मिलन र दबाइ को वितरण को विधि समयमा मतभेद।
आफ्नो धुन हात र प्रणाली संग प्याकेज रोज्नुहोस्। एक dropper राख्न, तपाईं एक विशेष योजना आवश्यक हुनेछ। यो चिकित्सा को बोतल हो छ।
एक शीशी मा यसको अन्त्य को एक टाँसिएको द्वारा प्रणाली तयार। को उछाल मा दबाइ पर्खनुहोस्। अर्को, रोगी गरेको हात मा एक tourniquet लागू र काँध तिर चयन नस हटाउन।
प्रणाली खोल्न र त्यहाँ मा हावा छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्। साथै, लागूऔषधको सही वितरण सुनिश्चित गर्नुहोस्। प्रणाली बन्द र आफ्नो दाहिने हात मा सुई लिन।
शीर्ष बायाँ औंठी प्रेस नस ट्रंक, त्यसैले तपाईं बैरल समाधान। छाला पियर्स, र त्यसपछि बिस्तारै एक सेन्टिमिटरले द्वारा नस मा सुई घुसाउनुहोस्। कट खोल्ने अप राखिएको छ कि र गर्नुपर्छ सुई पोत गर्न समानान्तर हुन सम्झना। रोगी गरेको हात बाट ताराहरु दोहन हटाउन।
को सिरिंज फिक्सिंग को लागि आधार गर्न प्लास्टर लागू र ड्रिप खोल्नुहोस्। प्रक्रिया समाप्त हुन्छ, यो सुई हटाउन र घाउ पकड।
तपाईं नसों इंजेक्शन प्रदर्शन लागि अल्गोरिदम थाहा छ। तर, यो सधैं एक पटक मात्र प्रदर्शन छैन। तपाईं एक दिन यी इंजेक्शन धेरै पटक राख्न आवश्यक छ भने, तपाईं कैथिटर प्रयोग गर्नुपर्छ - यो उपकरण सम्भव निरन्तर छाला पियर्स छैन बनाउँछ। यस्तो हेरफेर एक पटक मात्र आवश्यक छ गर्नुहोस्।
सफा हात र व्यक्तिगत प्याकेजिङ्ग देखि कैथिटर हटाउन। को पाखुरा मा एक tourniquet लागू र नस कीटाणुरहित।
75 डिग्री को एक कोण मा छाला अन्तर्गत कैथिटर सुई प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि, निर्देशन परिवर्तन र 15 डिग्री कोण समतल। यो स्थितिमा, तपाईं केही मिलिमिटरमा अगाडी सुई धक्का गर्न आवश्यक छ।
अर्को, नस पियर्स र यसको पूर्ण गर्न सुई प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो स्थिति, को कैथिटर लक मा। यो विशेष कपडा पैच को माध्यम द्वारा गर्न सकिन्छ।
तपाईं एक इंजेक्शन वा ड्रिप राख्न आवश्यक छ भने, त्यसपछि तिमी सिर्फ उपयुक्त होल खोल्न र चिकित्सा राख्नु आवश्यक छ। को कैथिटर एक लामो समय को लागि नस मा हुन सक्छ। यसको हटाउने पछि घाउ मा बरफ राख्न हुँदैन।
अल्गोरिदम कार्यान्वयन नसों इंजेक्शन रगत
केही लागूपदार्थ पूर्व-मिश्रण रगतले आवश्यक छ। यस मामला मा, नसों इंजेक्शन को अल्गोरिदम निम्नानुसार छ।
आफ्नो हात र स्लाइड तयारी प्रक्रियाहरु धुन। रोगी गरेको हात नस मा एक tourniquet लागू र रक्सी संरचना हटाउन।
छाला र नस प्वाल पार्ने काम र केही लाग्यो। को सिरिंज plunger र रगतको दुई पाँच milliliters प्रकार तान्नुहोस्। त्यसपछि tourniquet हटाउन र पिचकारी सामग्रीहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्।
को सुई हटाउन र एक पट्टी राखे।
अक्सर, जब नसों इंजेक्शन swells पोत प्रबन्ध। यस मामला मा, तपाईं तुरुन्तै हेरफेर रोक्न र सुई हटाउन आवश्यक छ। रगत curdle सम्म प्रतीक्षा र प्रक्रिया बारम्बार प्रयास गर्नुहोस्।
लागू गर्न इंजेक्शन, bruising पछि, यो आवश्यक छ भने आयोडिन ग्रिड वा absorbable nanodiamonds उपयोग गरदै प्रयोग गर्नुहोस्।
अब तपाईं नसों इंजेक्शन को कार्यहरूको अल्गोरिदम थाहा छ। तपाईं यस्तो प्रक्रिया तोकिएको छ भने, यो व्यवसायीक बारी गर्न आवश्यक छ। को रगत मा आत्म-हस्तक्षेप एक बरु deplorable परिणाम हुन सक्छ।
Appendicitis: वयस्क, बृद्ध, गर्भवती महिला र बच्चाहरु मा लक्षण
एक्यूपंक्चर, contraindications, आवेदन र सञ्चालन।
कीडे को संकेत
पछुताउनु छैन ताकि छनौट गर्न कसरी सिक्न
स्पेन बारेमा सबैभन्दा रोचक तथ्य
पार्श्व ventricle: शरीर रचनाको विज्ञान, समारोह
Technoelast EKP: प्राविधिक विनिर्देशों र प्रयोगको सुविधाहरू
परीक्षण परिणाम पढ्न सिक्दै: रक्त शर्करा को विश्लेषण मा डिजाइन गरिएको छ